आज मंगलबार : भगवान गणेशबाट ६ कुरा सिक्नुहोस् « Lokpath
२०७६, ४ चैत्र मंगलवार ०६:००
आज मंगलबार : भगवान गणेशबाट ६ कुरा सिक्नुहोस्
प्रकाशित मिति : २०७६, ४ चैत्र मंगलवार ०६:००
काठमाडौं आज मंगलबार । धेरैको प्रिय भगवान गणेशको पुजाआराधना तथा व्रतको लागि राम्रो मानिने दिन । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले हप्ताको सातै बारलाई विभिन्न देवी देवताको बारको रुपमा लिन्छन् र सोहि बारमा भगवानको प्रार्थना गर्छन् । सोहि अनुरुप मंगबारको दिन कार्यसिद्धिको लागि गणेश भगवानको पुजाआराधना गरिन्छ । भगवान गणेशको पुजा आराधना नगरी कुनै कार्य गर्दा पनि सफल हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता छ ।
भगवान् गणेशका अतिरीक्त यस दिन कालीमाता, दुर्गा माता र हनुमानको पनि पुजा आराधना गरिन्छ । भगवान गणेशलाई सिद्धिविनायक भनेर पनि पुकारीन्छ । मंगलबार गणेश मन्दिरहरुमा भिड लाग्छ । हात्तिको जस्तो शिर, मानिसको जस्तो बडेमानको भूडी, हात्तिको जस्तो लामो मोटो नाक, लामा लामा कान भएका गणेशको यी संरचनाबारे विभिन्न किस्साहरु जेडिएको पाईन्छ ।
ठुला कानबाट यो कुरा सिक्नुहोस्
ठूलो पेटबाट यो कुरा सिक्नुहोस्
चारवटा हातहरूबाट यो कुरा सिक्नुहोस्
भगवान गणेशले वाहन बाट यो कुरा सिक्नुहोस्
१. दोश्रो व्यक्तिको नराम्रोमा रमाइलो नमान्नुहोस्
२. आफूलाई अर्कोसँग तुलना नगर्नुहोस्
यसलाई मानिसको कमजोरी ‘डिफेक्ट’ भन्दा पनि फरक पर्दैन । सत्य यो पनि हो कि,अत्याधिक दुखको कारण हाम्रो आफ्नो दुख नभएर अरुको खुसी हुने गर्दछ । तर तपाई त्यो भन्दा माथि उठेर हिँड्नुहोस् ।
किनभने कोहि पनि व्यक्तिको वास्तविक कुरा मात्र उसलाई नै थाहा हुन्छ । हामी बाहिरी स्वरुप अर्थात नक्कली स्वरुपलाई मात्र हेरेर अरुसँग आफ्नो तुलना गर्दछौँ ।
त्यसैले हामीलाई लाग्छ हामी भन्दा अर्को धेरै खुसी छ । त्यसैले कहिल्यै आफ्नो तुलना ‘कम्पेयर’ अरुसँग नगरौँ ।
३. कुनै पनि कामको लागि दोश्रोको ‘डिपेन्ड’ नबनौँ
४. बितिसकेका कुरामा पटक(पटक अफसोस नगर्नुहोस्
यदि तपाईहरुको जीवनमा भूतकालका केहि घटनाले धेरै दुख बनाइरहेको छ भने त्यो कुरालाई बारम्बार नसम्झिनुहोस् ।
दुई पटक सम्झिनुहोस् तर तेश्रो पटक देखि नसम्झनुहोस् । त्योबाट केहि सिक्नुस् र अगाडिको बारेमा सोच्नुहोस् । जसले अरुको अगाडि रुन्छ उसलाई अरु मानिसले झनै खिस्याउन थाल्दछन् । त्यसैले बितिसकेका कुरामा ध्यान नदिनुहोस् । सम्झनुहोस् स् हिजोबाट सिकेर आज राम्रो बनाउनुभयो भने भोली धेरैथोरै राम्रो भईसक्छ ।
५. जुन कुरा आवश्यक छैन, त्यसमा ‘फोकस’ नगर्नुहोस्
सारा विश्वमा हामी जुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछौँ उक्त चिज आश्चर्यजनक रुपमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले आवश्यक कुरामा मात्र फोकस गनुहोस् ।
अरुको चासो राख्ने , अनावश्यक तर्क वितर्क गर्ने, अरुको खील्ली उडाउदा मजा लिने बानीले अन्तत हानी नोक्सानी तपाईको हुन्छ। तयसैले सकारात्मक सोँचसहित आफ्नो परिवारको आफू बसेको स्थानको र सिंगो राष्ट्रको भलोको लागी केहि गर्नपर्छ । अनिमात्रै तपाई बाँचेको सार्थक हुन्छ । विद्वानहरु भन्ने गर्छन् ”नमर्नु मात्रै बाँच्नु होईन ।”